Nepalistudio » ‘कांग्रेस, कम्युनिष्ट दलाल हुन् मधेशलाई फेरि पनि धोका दिन्छन्’ ‘कांग्रेस, कम्युनिष्ट दलाल हुन् मधेशलाई फेरि पनि धोका दिन्छन्’ – Nepalistudio
कांग्रेस, कम्युनिष्ट र मधेसी नेताहरू म्याद गुज्रेको ‘औषधि’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले अहिले पनि पार्टीको मुख्य एजेण्डा ‘जनमत संग्रह’ नै रहेको बताएका छन् । जनकपुरधामको रंगभूमि मैदानमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारसँग सम्झौता गरे पनि ‘जनमत संग्रह’को मुद्दा नत्यागेको दावी गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘अबकी माग, जनमत संग्रहका ऐलान’ उनको भनाई थियो । डा. राउतले सरकारसँगको सम्झौताले विजयी हासिल भएको भन्दै यसलाई कसैले गलत अर्थ नलगाउन् भनेर चेतावनीसमेत दिए । उनले आफुहरुले दलाल पार्टीहरूको जस्तो लेनदेन गरी सम्झौता नगरेको दावी गरे ।
सम्बोधनको क्रममा पटक पटक मधेसवादी दलका नेताहरूको आलोचना गरे राउतले । उनले मधेसी नेताहरूलाई दलालको संज्ञासमेत दिए । कांग्रेस, कम्युनिष्ट र मधेसी नेताहरूलाई म्याद गुज्रेको ‘औषधि’ भएको टिप्पणी गरे । कोटबाट औषधीको पत्ता निकालेर देखाउँदै भने, ‘यो औषधि हो । तर, म्याद गुज्रेको छ भने यसले काम गर्दैन यो खाएपछि रियाक्सन हुन्छ ज्यान जान्छ यस्तै हुन् कांग्रेस, कम्युनिष्ट र दलाल पार्टीहरू । त्यसैले अब उनीहरूमाथि विश्वास नगर्नूस ।’
‘मधेशवादी पार्टीहरूले चुनावका बेला ओलीलाई भोट नदिनु भनेका थिए’ डा. राउतले भने, ‘तर जनताबाट पाएको मत उही केपी ओलीको शरणमा लगेर बुझाए । यसवाट पनि उनीहरु दलाल हो भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।’
उनले समाजवादी पार्टी पूर्वनेकपा नेताहरूको भएको उनीहरुलाई दलालको दर्जामा राखे । ‘उपेन्द्र यादव र अशोक राइ पूर्वएमाले हुन् उनीहरु अझै पनि मधेसीलाई धोका दिन सक्छन् सत्तामा जानु बाहेकर अन्य भिजन छैन उनीहरुसंग ।’
अन्य दलहरूको कडा आलोचना गरेका डा. राउतले अब मधेसी जनताको पार्टी जनमत पार्टी मात्र रहने र दलालहरूको पत्तासाफ हुने दावी गरे । उनले मधेसी जनतालाई पार्टीको सदस्यता लिन आह्वानसमेत गरेका गरे । उनले भने, ‘जनमत पार्टीले जनताको राज ल्याउछ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छ ।’